Blockchain News 31 EyoMqungu 2018 - Blockchain News
EyoMqungu 31, 2018 admin
Blockchain News 31 EyoMqungu 2018
Japanese lwemiyalezo giant Line okuqalisa exchange cryptocurrency
inkonzo imiyalezo enkulu yaseJapan wabhengeza namhlanje – izicwangciso zalo ukuqala nasekusebenzeni exchange cryptocurrency, ukuba inikwe phakathi isicelo yayo lengxoxo kuyinto ikuyo phakathi kwayo 200 million abasebenzisi ngenyanga esebenzayo emhlabeni.
Le app Tokyo-based chat kuqinisekiswa ukuba uthumele isicelo ne-Financial Agency Services (FSA) - Regulator Japan-mali - ukuba babhalise baze baqalise lonaniselwano cryptocurrency. Isicelo uphantsi kohlaziyo.
inyathelo isigebenga imiyalezo-Abraham ukunikela urhwebo cryptocurrency iza ecaleni ukuphehlelelwa inkampani entsha ebizwa Line Financial, nayo eza lokumba ezifundisa iinkonzo zemali kubasebenzisi.
Line Financial ilandela Line sele ziwayo-mobile transfer imali kunye nenkonzo yentlawulo Line Pay, inkonzo amandla ngaphakathi app imiyalezo Line kaThixo. in 2017, Line pay igcwalisiwe 40 million zabasebenzisi ababhalisiweyo jikelele kunye umthamo intengiselwano yonyaka kunene ¥ 450 billion ($4.1 billion).
Bitcoin exchange Huobi izakuvula US ofisi
China-based Huobi, ngaphambili elinye lawona ukutshintshiselana cryptocurrency eli lizwe, zokusungula iofisi San Francisco.
IGosa eliyiNtloko Strategy Cai Kailong uthe “Huobi ujonge akhule kumazwe ngamazwe… U.S. izakuba yinjongo yethu khona ngoku.”
Huobi wakha kwikomkhulu ezintsha kule ndawo Silicon Valley, eziphawula push nje omnye fast ngokukhawuleza, ngokutsho isithethi inkampani.
Kwinyanga ephelile, Huobi imemezele ukuba ibambisene kwinkampani yotyalo i SBI Group ukuba okuqalisa iperi kokutshintshiselana cryptocurrency eJapan ukuze ukunikela ngeenkonzo yen-based.
SBI zezimali Virtual kunye Huobi Japan esalazisayo nayiphi na imida yeli ngokuqinileyo ngenxa ukuqalisa zabo ezahlukeneyo.
wezeziMali South Korea kaThixo: Akukho izicwangciso lokuvala cryptocurrencies
wezeziMali South Korea wathi urhulumente akukho izicwangciso ukuvala urhwebo cryptocurrency, iindaba ezimnandi kubatyali-mali bakhathazekile ukuba abasemagunyeni ukuze aye kufikelela amanyathelo ezinzima China xa ethintela namaqonga ngqekembe virtual.
Le mazwana Kim Dong-yeon ngoLwesithathu kuza njengoko barhwebi ekhaya kunye nehlabathi jikelele baye baphazanyiswe izimvo ezingquzulanayo kumagosa karhulumente eMzantsi Korea, a hub enkulu urhwebo cryptocurrency, ukuba Seoul wayeceba umlomo ukutshintshiselana ezinkozo digital lendawo.
"Akukho senjongo lokuvala okanye gqiba cryptocurrency (market),"UKim uthe, ukudibanisa umsebenzi karhulumente wakamsinya nokulawula ukutshintshiselana.
Abalwazi ngenjongo Seoul ukuba nsinya ngezikhonkwane kwi emarikeni ingumdlali ophambili ngaphaya kwaye yingozi ngu nkqubo jikelele, amasiko yelizwe ngaphambili ngoLwesithathu imemezele wayeyityhilile cryptocurrency mthethweni urhwebo exchange angaphandle licela $600 million.
"Inkonzo Amasiko iye ngokusondeleyo ujonge kwi yorhwebo lonaniso lwangaphandle ngokungekho usebenzisa cryptocurrency njengenxalenye iphulo karhulumente,"Kusho.
Blockchain News 20 EyoMqungu 2018
Ifoni ngokuqhubekayo p ...
Post Previous:Indlela ukuba umqambi blockchain
Post Next:Indlela ukuqhuba ICO e Switzerland